Mushrikiinta Qabuura caabudka oo Caabdu waaq ka mamnuucay dhagaysiga Siirada Nabi Maxammed Nabadgelyo iyo Naxariis dushiisa ha ahaatee iyo culimada salafka. | Halganka Online
Mushrikiinta Qabuura caabudka oo Caabdu waaq ka mamnuucay dhagaysiga Siirada Nabi Maxammed Nabadgelyo iyo Naxariis dushiisa ha ahaatee iyo culimada salafka.
Posted on Luulyo 18, 2010 by halganka
Waxaa maalinkii shalay ahaa laga mamnuucay Idaacadaha ka hawl gala gudaha Magaalada Caabud Waaq oo ay hada maamulaan Koox Qabuura Caabud ah oo ka amar qaadata Itoobiya sii daynta Siirada Nabi Maxammed Nabadgelyo iyo Naxariis dushiisa ha ahaatee taas oo si caadi ah looga sii dayn jiray Idaacada.
Maleeshiyada Qabuura Caabudka ah ee ay soo carbisay Itoobiya ayaa shalay ku amray maamulayaasha Idaacadaha ku yaala Caabud Waaq inay joojiyaan baahinta Siirada Nabi Maxammed Nabad gelyo iyo Naxariis dushiisa ha ahaatee, taas oo uu duubay Sh.Mustafa Xaaji Ismaaciil Haaruun oo ka mid ah Culimada Soomaaliyeed ee sida weyn ay duruustiisa u dhagaystaan shacabka Soomaaliyeed, taas badalkeedana ay iyagu keeni doonaan mid iyaga ka mid ah oo sida ay doonaan u qaloociya Siirada.
Dadka Xog-ogaalka ah ayaa arintaan ku micneeyay inay tahay isku dayo ay Qubuura caabudku ku doonayaan inay ku qariyaan dhaqankii suubaanaa ee Nabigeena Maxammed Nagad gelyo iyo naxariis dushiisa ha ahaatee, si ay ugu sahlanaato inay dadka Caamada ah ee aan aqoonin dhaqankii suubanaa ee Nabi Maxammed Nagad gelyo iyo naxariis dushiisa ha ahaatee ku khaldaan waxyaalaha ka baxsan Diinta Islaamka ee ay iyagu aaminsanyihiin.
“ Hadii Siirada Nabi Maxammed Nagad gelyo iyo naxariis dushiisa ha ahaatee la akhriyo, oo dadku ay bartaan aqoon fiicana u yeeshaan, waxaa banaanka usoo baxaysa Baadilka ay la wareegayaan iyo Shirkiga ay faafinayaan Qabuura Caabudku, Waxaa kale oo banaanka usoo baxaysa Gaala-jacaylka ay ku dhaqmaan iyo inay yihiin dad aan Diinta Islaamka wax raad ah ku lahayn” Sidaas waxaa yiri Sh.Yuusuf Sh.Ciise Axmed oo ah Waaliga Wilaayada Islaamiga ah ee Galgaduud.
Masuuliyiinta Idaacadaha shaqada laga joojiyay iyo shacabka ku dhaqan magaalada Caabud Waaq ayaa si weyn uga xumaaday tilaabada ay Maleeshiyada Qabuura caabudka ahi ku mamnuucday baahinta Siirada Nabi Maxammed Nagad gelyo iyo naxariis dushiisa ha ahaatee, sidoo kale waxaa si weyn uga dhiidhiyay Culimada Soomaaliyeed.
Maleeshiyada mamnuucday baahinta Siirada ayaa waxay si toos ah uga amar qaadataa Dowlada Kirishtaanka ah ee Itoobiya oo u aragta Qur’aanka Kariimka ah iyo Sunada Nabi Maxammed Nagad gelyo iyo naxariis dushiisa ha ahaatee inay yihiin qatarta ugu weyn uu ka hor-imaanaya ajandayaasha guracan ee ay Gaaladu ku doonayso inay ku qabsato Dalka Dadka iyo Muslimiinta ah.
« Idaacad Islaami ah oo markii ugu horeysey shalay laga hirgeliyay Wilaayada Islaamiga ah ee Galgaduud. Wilaayada Islaamiga ah ee Gedo oo maanta ka warbixisay waxyaalihii u qabsoomay bishii “Rajab” ee dhamaatay. »